मङ्गलबार, ०४ कार्तिक २०७७, ११ : ०५
काइलीको धम्कीपूर्ण पोस्ट
फेसन उद्योगका सबैभन्दा प्रभावशाली महिलाको रुपमा स्थापित काइली हाल एकल आमाको रुपमा सीमित छन्। ट्राभिस स्कटसँगको सम्बन्ध दिगो हुन सकेन। सम्बन्ध बिग्रिए पनि रमाइलो गर्न भने छाडेकी छैनन्।
कानुनविज्ञ किम कार्दसियन
हलिउडका सेलिब्रिटी आफ्नो सौन्दर्य मात्र पस्कन जान्दैनन्, गम्भीर कुरामा अति गम्भीर हुन पनि जान्दछन्। अब सेन्सेस्नल अभिनेत्री तथा मोडल तथा टेलिभिजन सो उत्पादक किम कार्दसियनलाई नै हेरौँ न !
दीपिकाको भाग खोसेपछि...
‘प्यार का पञ्चनामा’ र ‘सोनी के टिट्टु की स्विटी’जस्ता फिल्मका निर्देशक लभ रञ्जनमाथि एक अभिनेत्रीले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएकी थिइन्।
कपिल शर्मा एक उम्दा कमेडियन हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन। उनको कार्यक्रम ‘दि कपिल शर्मा सो’ अत्यधिक हेरिने टेलिभिजन कार्यक्रममध्ये एक पर्छ। टेलिभिजन लगायत बलिउडका स्टारहरू उनको कार्यक्रमलाई निकै रुचाउँछन्।
ऋचा चढ्ढाका प्रेमी
बलिउड अभिनेत्री ऋचा चढ्ढा चाँडै नै ‘अश्विनी ऐयर्स पंगा’मा देखिने भएकी छन्। उनी फिल्ममा मेन्टरको भूमिकामा छिन्। यसको काम हुँदै गर्दा कसैले उनलाई सोधेको थियो, ‘ब्या कैले गर्नी ?’
वाहियात ड्रेसको चर्चा !
हालै बलिउडमा भएको एउटा कार्यक्रममा कलाकारको भिड जम्मा भएको थियो। कलाकारको भिड जम्मा हुनु र तिनको ड्रेसको चर्चा नहुनु त भएन ! नहुने कुरै हुँदैन ! त्यसैले पत्रकारहरुले चाहिँ कार्यक्रमका उम्दा र वाहियात ड्रेस लगाउने कलाकारको सूची नै तयार पारे।
कार्दसियन फकाउने कला
३५ वर्षे रियालिटी स्टार कोल कार्दसियनले आफ्नो एक वर्षे सन्तान ट्रु थम्सनका पिता ट्रिसन थम्सनलाई लात हानेर घरबाट निकालेको केही महिना भयो।
ब्राड पिटले रुवाए !
सन् २०१९ ब्राट पिटका लागि रोचक वर्षका रुपमा रह्यो। यस वर्ष उनको ‘वन्स अपन अ टाइम इन हलिउड’ व्यवसायिक रुपमा सफल मात्र भएन, उनको अभिनयको बेस्कन चर्चासमेत भयो।
सेलिब्रिटी सन्तानका उदेक नाम
बरु सन्तान जन्माउनु सजिलो होला तर तिनको नाउँ राख्नु गाह्रो ! झन् सेलिब्रिटीका लागि त यो बडो टाउको दुखाइको विषय बन्ने गर्छ। हालै हलिउड गसिप वेबसाइटले आफ्ना सेलिब्रिटीहरुले सन्तानको नाम राख्न गरेको मिहिनेत र तिनका अनौठा नामबारे लेखेको थियो।
मेगन र ह्यारीले छाडे दरबार
मेगन मर्केल हलिउडकी एक प्रख्यात कलाकार हुन्। उनको सौन्दर्यबाट मुग्ध भएर बेलायती राजकुमार ह्यारीले उनलाई आफ्नो दुलही बनाएका थिए तर दरबारमा मेगनको मन अडिएन। त्यसैले यो जोडी नयाँ सन्तान जन्मनेबित्तिकै क्यानडा बसाइँ सर्ने अन्तिम निर्णयमा पुगेको छ।
ब्राड पिटको जोक
गोल्डेन ग्लोब अवार्डमा हलिउड नायक ब्राड पिट एक्लै आए। एन्जेलिना जोली र जेनिफर एनिस्टनसँगको सम्बन्ध टुटेपछि यी नायकको नाम फरक फरक युवतीसँग जोडिने गरेको छ।
डेटमा एरियल र वेनवार्ड
लेटेस्ट लभ बर्ड नायिका एरियल विन्टर र ल्युक वेनवार्डले गोल्डेन ग्लोब अवार्डलाई हट डेट स्पटको रुपमा उपयोग गरे।
लियोपार्ड बिकिनीमा बेला
क्यारिबियन समुद्र तटमा बिकिनीमा रहेकी मोडल बेला हदिदका सेन्सेस्नल तस्बिरहरु यतिबेला सार्वजनिक भएका छन्।
नेहरु–गान्धी परिवारबारे आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट गरेको आरोपमा न्यायिक हिरासतमा पुगेकी बलिउड नायिका पायल रोहतगी हिरासतमुक्त भएलगत्तै स्वरा भास्कर विरुद्ध उत्रिएकी छिन्।
शमाको मोनेकोनी अवतार
अमेरिकामा बिदा मनाइरहेकी बलिउड नायिका शमा सिकन्दरको तस्बिर यतिबेला भाइरल भइरहेको छ।
साक्षीको होलिडे मुड
सन् २०२० को प्रारम्भसँगै बलिउड सेलिब्रिटीहरु अहिले होलिडे मुडमा छन्। गच्छेअनुसार कोही युरोपतिर बराल्लिइरहेका छन् त कोही बैंकक र श्रीलंका पुगिरहेका छन्।
क्रप टपमा स्टनिङ नुसरत
बलिउड बाला नुसरत भरुचा ह्वाइट क्रप र ब्लु डेनिममा देखिइन्। लाइट मेकअप र ब्ल्याक गगल्स लगाएकी उनी सुन्दर देखिएकी थिइन्।
नयाँ वर्ष मनाउन भारतीय नायिका अनुष्का शर्मा क्रिकेटर विराट कोहलीलाई लिएर स्विजरल्यान्ड पुगेकी छन्।
भारतीय नायिका दीपिका पादुकोणले विवाहअगाडि नै गर्दनको पछाडि रणवीर कपुरको नामको ट्याटु बनाएकी थिइन्।
ब्ल्याक बिकिनीमा करिश्मा
रियालिटी सो बिग बोसमा सहभागी भएसँगै चर्चामा आएकी भारतीय अभिनेत्री करिश्मा तन्नाको ब्ल्याक बिकिनी पोज अहिले भाइरल भइरहेको छ।